Lova & Tantara Archives - IntoKildare
Tsy isalasalana fa i Co. Kildare no ivon'ny Atsinanana Fahiny any Irlandy. Feno toerana lova avokoa ny tanàna sy vohitra rehetra, manomboka amin'ny tsangambato manan-danja ao amin'ny Kristianisma tany am-boalohany ka hatramin'ny traikefan'ny mpitsidika mifampiresaka izay mampianatra ny tantara amin'ny fomba mahafinaritra sy ahalalana.
Betsaka ny zavatra azo ianarana avy amin'i Strongbow ka hatrany St. Brigid ka hatrany Ernest Shackleton ary na dia i Arthur aza Guinness vitsivitsy monja amin'ny lisitra lava nataon'i Co. Kildare an'ireo mponina malaza taloha izay mitambatra mba hanome ny Co. Kildare fifangaroan'ny tantara sy ny lova. Mandehana lalindalina kokoa amin'ny lasa County Kildare ary ampitomboy ny fahalalanao amin'ireo diabe, lalana ary toerana mahasarika natokana ho an'ireo mponina taloha.
Solas Bhride (jiro / lelafon'i Brigid) dia Ivotoerana ara-panahy kristiana mifantoka amin'ny lova navelan'i St. Brigid.